Saturday May 28, 2016 - 15:25:41 in Sports by Xafiiska Muqdisho
Casemiro ayay u badan tahay inuu ku soo bilowdo khadka dhexe isagoo ka garab ciyaari doono Toni Kroos iyo Luka Modric, halka saddexda hore ay ahaan doonaan Gareth Bale, Ronaldo iyo Karim Benzema.
Atletico, daafaceeda waaya araga ah ee Diego Godin ayaa taam ah ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac bowdada ah, iyadoo Simeone hadda qabin wax dhaawacyo kale ah.
Atletico ay u badan tahay inuu ku soo bilowdo Fernando Torres isagoo ka garab ciyaari doona ninka reer France ee Antoine Griezmann, khadka dhexe afar xiddig oo muhiim ah ayaa istaagi doona waana Saul Niguez, Augusto Fernandez, Gabi iyo Koke.
Maxaa Kulankan laga soo calaamadiyey:-
Real Madrid ayaa gaartay final / European Cup Champions League markii ugu 14th, waana in ka badan koox kale.
Waxa ay badiyeen 10 ka mid ah finaaladaas – sidoo kale rikoorkooda waxaa kujira in ay badiyeen afartii Final ee ugu dambeyay (1998, 2000, 2002, 2014).
Atletico Madrid ayaa gaartay final / European Cup Champions League markii seddexaad (1974, 2014, 2016). Waxa ay ilaa iyo haatan laga badiyay labadii finalka ee ugu dambeeyay.
Waxaa caawa qasab ah in ay ku guuleysto koox Isbaanish ah / Champions League xilli ciyaareedkii sedaxaad oo isku xigta ayay noqon doontaa, waana rikoorka ugu dheer el kooxaha England oo ku guuleysatay lix jeer oo isku xigta tartankaan intii u dhaxeysay 1977 si ay u 1982.
Atletico ayaa badisay todoba ka mid ah 16kii kulan ee ugu danbeysay Real Madrid ay ku wajahday tartamada oo dhan.
Ronaldo ayaa dhaliyay / ama cawiyay 74% goolasha Real Madrid ay dhalisay xili ciyaareedkaan waxaana uu doonayaa inuu jabiyo rikoorka gool dhalin ee uu hal xili ciyaareed ka dhaliyay Champions League.
Shaxda Macaquulka ah ee labadda kooxood:-
Real Madrid Line-up (4-3-3) Navas – Marcelo, Pepe, Ramos, Carvajal – Kroos, Casemiro, Modric – Bale, Benzema, Ronaldo.
Atletico Madrid Line-up (4-4-2) Oblak – Felipe Luis, Godin, Gimenez, Juanfran – Carrasco, Gabi, Koke, Niguez – Torres, Griezmann.
DEG DEG:-Wasaaradda A.Gudaha XFS oo Digniin adeg u dirtay Madaxda KGS
06/11/2018 - 12:00:48
Akhriso:-Qodobada looga hadlayo Kulanka Golaha Shacabka ee Maanta
29/10/2018 - 08:15:18
Kulanka Xildhibaanada Golaha Shacabka oo furmay
27/10/2018 - 11:52:19
Kulanka Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya oo furmay
24/10/2018 - 12:09:02
Fariin adeg oo loo diray Musharaxiinta Koonfur Galbeed
23/10/2018 - 10:24:36